Fiara-mitarika fihavanana voalohany any Bhutan-Thailand
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Fiara-mitarika fihavanana voalohany any Bhutan-Thailand
Ny dia epotika naharitra valo andro dia niainga avy tao Bangkok ny zoma 21 jona ary hahatratra 3,000 km amin'ny fotoana ahatongavany ao amin'ny renivohitr'i Bhimpese Thimphu ny zoma 28 jona. Ny làlana dia manaraka ny làlambe telo misy an'i Myanmar-Thailand-India mamakivaky ireo firenena telo alohan'ny hidirana ao Bhutan amin'ny alàlan'ny Phuentsholing amin'ny sisintanin'i Bhutan-India ny alakamisy 27 jona.
Ny 'Bhutan-Thailand Friendship Drive - Mampifandray ireo olona avy amin'ireo fanjakana roa amin'ny alàlan'ny tany' dia iray amin'ireo hetsika lehibe nanamarihana ireo 30th tsingerintaona taona 2019 nananganana ny fifandraisana ara-diplomatika eo amin'i Thailand sy Bhutan. Izy io koa dia ho fankalazana ny Royal Coronation mahasoa ao Thailandy ary maneho ny fanajan'ireo firenena roa tonta ny andrim-panjakan'ny mpanjaka, miaraka amin'i Bhutan manana mpanjaka koa.
Andriamatoa Chattan Kunjara Na Ayudhya, governora lefitra misahana ny varotra iraisam-pirenena - Azia sy Pasifika atsimo, dia nilaza fa satria ny fihodinana voalohany teo amin'i Thailand sy Bhutan, ity hetsika ity dia mikendry ny hanamafisana kokoa ny fifandraisana amin'ny sehatra rehetra eo amin'ny fanjakana roa tonta.
Mandray anjara amin'ny 'Bhutan-Thailand Friendship Drive - Connecting People of the Two Kingdoms by Land' dia mpandray anjara 21, ahitana ny tompon'andraikitra ao amin'ny Royal Thai Government, Embassy Royal Bhutanese, Thairung Union Car Public Company Limited ary solontena tanora roa - iray avy amin'ny Thailand sy Bhutan.
Fihetsiketsehana sakafo enina fitsangatsanganana ho an'ny 2019
Westjet dia mampifandray an'i Alberta, Newfoundland ary Labrador